eNasha.com - 'क्याच हर !'
'क्याच हर !'
उनलाई पत्रकारमाझ आफ्नो उमेर बताउन अझै झिँझो लाग्छ । तर जन्म दिन चैत्र ८ र छोरो सात वर्षको पुग्यो भन्न चाहिँ चुक्दिनन् । पछिल्लो समयमा 'क्याच मि' एल्बम लिएर बजारमा छाएकी राधी क्षेत्रीलाई सङ्गीतकर्ममा लागेको आठ वर्षपछि मात्र सफलता हात परेको छ । यसअघि उनले निकालेका दुइ एल्बम 'वर्षातका बेलामा' र 'उपहार' यसरी गुमनाम भए कि उनलाई गायन क्षेत्रदेखि नै वितृष्णा भयो ।
"नेपालीको मन न हो, यस पटक त ज्योतिषीलाई देखाएरै एल्बम निकालेँ", ठमेलको एउटा रेष्टुराँमा हाँसो थाम्दै भनिन्- "ज्योतिषी बाजेले पनि मलाई 'क' नामबाट एल्बम जुराऊ भन्नु भएकाले 'क्याच मी' राखेकी थिएँ । नभन्दै एल्बमले चर्चा चाहिँ पायो ।"
हुन पनि यसअघि राम्रै मिहिनेत गरेर निकालेको एल्बम पनि नचल्दा उनले आफूले गरेको कामलाई यस पटक राम्रै 'रिभ्यु' गरिन् । यसअघिका दुइ एल्बममध्ये पहिलो एल्बम 'पप' निकालेकी थिइन् भने अर्को चाहिँ विशुद्ध आधुनिक । दुवैले उनलाई सन्तुष्टि नदिएपछि अहिले पपआधुनिक मिसाएर निकालेकी छिन् ।
भैरहवा, बर्मेली टोलकी स्थायी बासिन्दा राधी त्यसो त स्कूल पढ्दा अलिअलि गाउने गरे पनि कलेज पढुञ्जेलसम्म पनि गायनलाई आफ्नो पेशा बनाउँला भनेर सोचेकी पनि थिइनन् । तर पहिलो पटक उनी धेरै मानिसहरुका अघिल्तिर उभिएर गाएको गीत चाहिँ अझै सम्भिmरहेकी छिन् । ज्ञानु राणाले गाएको 'कसैले बुझेन मनको बहलाई...' स्थानीय लोकगीति प्रतियोगितामा धेरै दर्शकका अघिल्तिर उभिएर उनले गाएकी थिइन् । उनले पुरस्कार त हात पारिनन् तर जुन वाहवाही त्यहाँ बटुल्न भ्याइन्, त्यसले नै उनलाई सदूर भविष्यमा गायनप्रति नतानी रहन सकेन । उनी भैरहवामा नै एउटा स्थानीय बैंकको क्यासियर बनेर जागीर खाइरहेकी थिइन् र बचेको समयमा स्थानीय दुइ ब्याण्डहरु तरङ्ग र झन्कारका लागि गाउने गर्थिन् । यी ब्याण्डहरु चाहिँ दशैँ-तिहारमा कर्न्र्सट गरेर स्थानीय टोलका हितार्थ पैसा जम्मा गर्ने गर्थे । यस्तै गायनको बेला हो, उनलाई लब कार्कीले भेटेका । लबलाई उनको गायन मन परेपछि यो स्वरलाई देशभरि नै फिँजाउने इच्छा जाग्यो । उनले नै कर गरेर राधीलाई काठमाडौँका रेकर्डिङ स्टुडियोमा नयाँ गीत रेकर्ड गराउन लगाए ।
"त्यो बेलाको साङ्गीतिक माहौल नै बेग्लै", २०५० को दशकको मध्यतिरका कुरा सम्झँदै उनले भनिन्- "त्यसबेला एउटा गीत रेकर्ड हुँदा पनि रेडियोका सञ्चारकर्मीहरुले खोजीखोजी बजाइदिन्थे अनि गीत बज्दा पनि तिनले गीत आउने बेलामा फोन गरेर सम्झाउँथे रेडियो सुन्नका लागि । अहिले त पूरै एल्बम निकाल्दा पनि 'रेस्पोन्स' गर्दैनन् ।" त्यसो त राजधानीमा अहिले दुइ दर्जन एफएम पुगिसके तर पनि गायक-गायिकाहरुको गुनासो अझै रोकिएको छैन- "मेरा गीतै बज्दैनन् ।" उनको गुनासो टेलिभिजनतिर पनि छ । उनले निकालेको 'क्याच मी' एल्बमको शीर्षक गीतको म्युजिक भिडियो राम्रो बने पनि टीभीहरुले राम्ररी नबजाइदिएकोमा चित्त बुझेको छैन । अरु त अरु नेपाल टेलिभिजनले आफ्नो भिडियोलाई 'अश्लील' भन्दै प्रसारण नै नगरिदिएकोमा उनी छक्क परेकी छिन् । उनको भनाइ छ- "मेरो भिडियोभन्दा अरुको भिडियो हेरिसक्नुका छैनन् । ती प्रसारण भइरहेकै छन् । मेरो त्यही गीत एनटीभी मेट्रोमा मज्जाले बजिरहेको छ, तर नेटेले बजाइदिएन ।"
यो एल्बम निकाल्नुअघि हिमालयन रकर्स नामक ब्याण्डसँग संलग्न रहेकी राधीले राजधानीका विभिन्न होटलहरुमा कर्न्र्सट गरिरहेकी थिइन् । "अझै पनि छोडेकी छुइनँ", उनले हतारहतार भनिन्- "गाउनु मेरो शोख हो र अझ दर्शकका अघिल्तिर प्रत्यक्ष गाउन पाउनु, आफ्नो क्षमताको परख पनि हो ।" त्यसो त थरिथरिका मानिसहरुका अघिल्तिर दैनिक हिन्दी, अंग्रेजी र नेपाली गीतहरु गाएर तिनलाई सन्तुष्टी बनाउनु पनि कम चुनौतिको काम होइन, भन्छिन्- "त्यसैले त्यस्तो 'च्यालेञ्ज' मलाई मन पर्छ ।"
गायनले मात्र आफ्नो जीवन धान्न नपुग्ने भएकाले उनी ठमेलस्थित एउटा ट्राभल एजेन्सी एड्वेन्चर आईटीबीमा दिउँसोको समय सदुपयोग गर्छिन् ।
यतिबेला 'क्याच मि'को सफलतालाई 'इन्जोय' गरिरहेकी राधीलाई अहिले लागिरहेको छ- "थाहा छ तपाइँलाई ? समय नआई केही हुँदोरहेनछ । पहिला अनेक थरि उपाय रचेर पनि मलाई सफलता जुरेन, अहिले मलाई मान्छेहरु खोजीखोजी आउन थालेका छन् ।" उनलाई अहिले एउटै धोको छ, "अब स्टेज कार्यक्रमहरुको अफर आए, एल्बममा लगाएको खर्च उठाउन पाउने थिएँ ।" आफ्नो सही समय आएको थाहा पाएपछि राधी अहिले विभिन्न गीतकारहरुका राम्रा शब्द खोज्दै घरघर धाउन थालेकी छिन् । कुनै राम्रो गीतकारको घरमा तपाइँले पनि भेट्नु भयो भने अचम्म नमान्नुस् है !
गायिका रिलिज समुद्रपार कीर्तिमान सङ्गीतकार ट्रयाक बाहिर लुकेका कुरा उपलब्धि तातोपीरो क्या बात ! नेपाली तारा विचार भिडन्त रुचि प्रेम र विवाह गायक पेज थ्री गीतकार अवार्ड बजारमा